LỌ - cmoapi.com
Ngwaahịa dị elu ga-enwerịrị ike
nnyocha dị mma
Ulo oru anyi bu GMP, cGMP
ISO ： 9001 ： 2008 gbaara ezi àmà.
Anyị na-enye CMO & API one-stop ser-
vices: R&D, mmepụta, nrụpụta-
m na ahịa.
CMO na API otu ọrụ nkwụsị
Nhazi usoro na nkwekọrịta R&D
CMOAPI nwere ike ịnye ọrụ ndị a, nke iwu anyị siri ike na nchekwa ikike ọgụgụ isi (IP), na-ahụ na arụnyere ọrụ na ntụkwasị obi siri ike n'oge niile.
CMOAPI maka Nchọpụta Ọgwụ bụ igwe ojii, usoro ọgụgụ isi na-enyocha ihe ọmụma sayensị na data iji kpughee njikọ ndị ama ama na nke zoro ezo nwere ike inyere aka nwekwuo ike na nzụlite sayensị.
Ngwunye pere mpe
N'ime afọ iri gara aga, CMOAPI anọwo na-enye njikọ omenala na ọrụ nrụpụta pụrụ iche. Ogo ọrụ anyị nwere ike ịnwe site na obere batrị milligram ruo tọn nnukwu nrụpụta ọrụ.
Usoro R&D na usoro mmepe ụzọ ọhụụ
CMOAPI bụ onye na-ebubata ọgwụ nke Ndị ahịa ọgwụ na nkwekọrịta R&D.
JINAN CMOAPI BIOTECHNOLOGY CO., LIMITED. Tọrọ ntọala na 2007, bụ ụlọ ọrụ teknụzụ nke ụlọ ọrụ na-ahụ maka nyocha, mmepe na azụmaahịa nke ngwa ahịa ọgwụ. Ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ahụ: Lorcaserin, ndị etiti nke Lorcaserin, orlistat ， Sesamol, tadalafil na ndị etiti nke tadalafil, wdg. ụlọ ọrụ anyị nwere nchọpụta zuru ezu. akụrụngwa, usoro 60 nke HPLC, usoro 20 nke chromatograph gas, LCMS, ELSD, ultraviolet na ndị na-ahụ anya, ndị na-agba mmiri na ihe ndị ọzọ dị elu. Ọ gafere ISO14001, ISO9000 na DMF asambodo site na njikọ na nnweta, ma nwee usoro njikwa njikwa mma.
Companylọ ọrụ anyị na-eji ọtụtụ ndị ọkachamara ọkachamara nwere usoro nyocha nke mba ụwa, ma nwee ikike zuru oke nke nyocha ụlọ nyocha, ule nnwale na imepụta ihe eji emepụta ihe. Enwere ndị dọkịta 11 na ndị isi 46, ndị ọkà mmụta sayensị, na ndị injinia na ụlọ ọrụ anyị. Ihe mgbakwasị ụkwụ API na-ekpuchi mpaghara nke ihe karịrị 40 mu. , ebe obibi, ebe obibi aghara, na ndị ọzọ.
"CMOAPI bu ISO 9001: 2008 gbaara ezi ama ma ahia ya nile na-agbaso usoro iwu njikwa nke mba di."
DMF gbaara ezi àmà